Thenga ama-Tip-Up Halter Wokusika okungenamikhono ongenamikhono Kwabesifazane - Ukuthumela Kwamahhala & Ayikho Intela | WoopShop®
Iziphuzo Zokutshala ezingenamikhono ezingenamikhono ezingenamikhono Kwabesifazane
oluhlaza / M oluhlaza / L mnyama / L oluhlaza / S mnyama / S mnyama / M mhlophe / L mhlophe / S mhlophe / M
Iziphuzo Zokusika ezingenamikhono ezingenamikhono ezingenamikhono Kwabesifazane - okuluhlaza / M ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Qaphela: Sicela ulandele ngokuqinile ishadi lesayizi ukuze ukhethe usayizi. Ungakhethi ngqo ngokuvumelana nemikhuba yakho. Usayizi ungaba no-1-3cm umehluko ngenxa yesilinganiso semanuwali. Sicela uqaphele lapho ulinganisa. Le nto ine-elasticity ethile, futhi kukhona umehluko omncane wombala phakathi kwezinto nezinto ezithombeni.
Phezulu okuhle impela, nezinto ezisezingeni elihle nazo.
Ikhwalithi enhle yentengo futhi enhle ngempela!
Kubukeka kukuhle kumnyama, kungabonakali kahle futhi kukulingana okuhle impela
Kufike esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili ngosuku engilidinga ngalo! Ngijabule kakhulu ngalokhu, ikhwalithi enhle, impahla enhle futhi ibukeka njengezithombe.
Ihembe elihle elibukeka njengesithombe.